Wareejinta ChaCha ee Mobile-ka waxay ahayd mid dhalaalaya | Martech Zone
Aniga (iyo kuwa kale) Marna runtii u fahamsan yahay ChaCha. ChaCha waa halyeey ka soo jeeda magaalada Indianapolis waxayna heshay tan maalgelin ah gadaasheeda. Waan fahmi waayey sababta qof kale u yeeli lahaa lacag ku tuur mashiinka raadinta ee ku shaqeeya bina aadamka. Waxaan u maleynayay inay aad u kheyraad badan tahay isla markaana waqti lumis… lagu xukumay dhimasho dhibic.
Waxaan ahaa kuwa Daalimiinta ah.
ChaCha waxay samaysay wax aan aad ula yaabay. Waxay ogaayeen waxa ay ku fiicnaayeen - natiijooyinka raadinta saxda ah markii ugu horeysay - waxayna ogaadeen dhexdhexaadka meesha ugu wanaagsan ee la isticmaali karo = Mobile. Waxay ka heleen faa'iidada aadanaha dhinacooda waxayna uga faa'iideysteen awooddooda buuxda, raadinta codka ku saleysan.
ChaCha ayaa dib isugu soo noqotay, way codaysay Codsiga ugu fiican ee Mobaylka ee AT&T iyo bilaabista labadaba raadinta moobiilka ku saleysan codka iyo raadinta SMS-ka oo aad u fiican.
Waxaan tijaabiyey naftayda ChaCha, anigoo u diraya 242242 weydiinayana
Goorma iyo saacadee ayey yihiin Ururka Makhaayadaha Qaranka sannadkan?
Dhowr daqiiqo gudahood ayaan dib ula soo noqday taariikhaha, saacadaha, iyo halka lagu qabtay - si wanaagsan ayaa loo qaabeeyey oo ay fududahay in laga akhriyo taleefankayga gacanta (Razr).
ChaCha ayaa i bartay casharro qaar
Weligaa ha dhayalsan hoggaamiye soojiidasho leh, tamar leh. Scott Jones wuxuu leeyahay in kabadan labaatan sano oo waayo aragnimo ah waana halyeey hal abuur ganacsi leh, hal abuur leh, istiraatiijiyad, iyo maal-galiye maalgashi. Waxaan u maleynayaa inay tahay xiisaha Scott iyo kooxda hibada leh ee uu dhigay taas oo u rajeysay shirkadan inay guuleysato. Anigu ma ahayn mu'min, laakiin waxay hubo inay ahaayeen!
Sababtoo ah shirkaddu maanta si wanaagsan uma shaqeyneyso, ha xisaabin berri. Waxaan ku noolnahay adduunyo natiijooyinku keeneen, dulqaad badan, miyaanay ahayn? Waxaan arkaa ganacsi bilow ah, fiiri qorshahooda ganacsi, waxaan daawadaa iyaga oo halgamaya, waxaanan u malaynayaa in geeridu ku dhow dahay. Xaqiiqdu waxay tahay in shirkad weyn ay tahay shirkad weyn mararka qaarkoodna waxay u baahan yihiin oo kaliya inay helaan jidkooda. Dhaqdhaqaaqa wareega ee ChaCha waa 3M Post-It Note oo ku jirta buuggayga.
Maalgelinta weyn waxay kordhisaa suurtogalnimadaada guusha. Dad aad u tiro badan ayaa u malaynaya in, shabakaddan duurjoogta ah ee ballaadhan, qof kastaaba uu noqon karo hal-ku-maal-yahan dot-com Waan jecel nahay sheekooyinkaas oo waxaan ka aqrinaa meel kasta. Runtu waxay tahay inay wali lacag ku qaadaneyso lacag sameynta.
Waxaan u maleynayaa inaan waxyar ka maseyray maalgalinta cajiibka ah ee ChaCha ay ka heshay kuwa la midka ah Scott, (Jeff) Safarada Bezos iyo Simon Equity Partners. Waan ku kalsoonahay in, la siiyay ilaha ay leeyihiin qaar ka mid ah dhibcaha-coms, waxaan la dhisi karaa ganacsi guuleysta qaar ka mid ah asxaabteyda iyo fikradaheena. Sidee ganacsade aan hanti lahayn u helayaa fursad sida raggaas oo kale ah?
Waxaan rajaynayaa inaan la kulmo Scott maalin oo aan waydiiyo. Waqtigan xaadirka ah, waan sii wadi doonaa isticmaalka muruqyadeyda si aan u kaxeeyo fikradahayga si tartiib tartiib ah iyo dadaal leh Waxaa laga yaabaa inaan ka helo Cisco.
Ama waxaa laga yaabaa inaan qoraal u diro 242242.
Tags: maaraynta macaamiishaFaux pasqabashada hogaankaMedia Social Suuqstephen coleyteleportmenu soo gal wordpresstuuryo wordpress
Waad ku mahadsan tahay kudos Doug!
Fiiri qodobkan. Waxaan ku guuleysanay abaalmarinta 'AT&T' Fast Pitch 'ee horumarka mobilada.
Shaqooyin badan oo adag usbuucyadii / bishii la soo dhaafay ayaa lagu soo gabagabeeyay abaalmarintan win guul weyn noo ah!
Waan arkay taas, Todd - hambalyo! Waxaan rajeynayaa inaan fursad u helo inaan maalin uun booqdo ChaCha oo aan la kulmo kooxdaada.
Doug (iyo Todd, iyo Scott Jones),
Waxaan fadhiyaa guddiga abaalmarinta MIRA Awards waana layaabay markaan aqriyay soo gudbinta sanadahaan loogu talagalay raadinta moobiilka. Doug, waxaan ku dhawaaqayaa dhammaan faallooyinkaaga - waa wax qabow wixii ay sameeyeen. Waxaan tijaabiyey sidoo kale Isniintii hore markii aan garaacay webka anigoo isku dayaya inaan ogaado waqtiga ay bilaabmayso ciyaarta ugu dambeysa ee NCAA habeenkaas. Markii aan si fudud ku waayey, waxaan go aansaday goor dambe in aan qoraal ugu diro ChaCha oo aan dib ugu celiyo wax ka yar 2 daqiiqo! Wow, taasi way qabowday. Runtii waan arki karaa tan oo shaqeyneysa markay dadku safrayaan, u baahan yihiin macluumaad isla markiiba khuseeya, iwm.
Hadda, waa tan su'aasha aan rabo inaan weydiiyo Scott. Sideed lacag ugu samaysan kartaa qaabkan? Aaway dakhligii? Ayaa bixiya hagayaasha?
Ugu dambeyntiina, ma garanayo qiimaha ay bixiso, laakiin waxaan mar hore haystay koonto ChaCha ah oo aan awood u leeyahay in aan internetka galo, oo aan ku daro lambarka taleefankayga, ka dibna aan arko taariikhda su'aalahayga iyo jawaabahoodu way fiicnaayeen.
Midkani wuxuu xiiso u yeelan doonaa daawashada.
Post weyn Doug.
Waxaan raacay ChaCha dhowr sano, weligayna runtii ma aanan fahmin. Baadhitaanka la hago ee bini'aadamka - sidaad u sheegtay waa shaqo / kheyraad xoog leh oo sidaas darteed, gaabis Runtii waxaan doonayay inaan siiyo sumad gaar ah unique “WAIT…. Waa Google. ” Tan iyo markasta oo aan isku dayo, waxay isiisay natiijooyin isku mid ah sida Google as kaliya ay tahay 10X waqtiga.
Sikastaba - mar aan aqriyay dhowr bilood kahor waxay ahaayeen 'balaadhin' mobilada - Waan ogaa in 'ku dhawaaqida' soo socota inay ukummadooda ku ridayaan dambiishan. Tan iyo markaas, waxaan ku riyaaqay isticmaalka nooca mobilada.
Jawaabtii aan jeclaa waxay ahayd su'aashaydii doqonnimada ahayd - "Waa maxay macnaha noloshu?" Aniguna waan soo noqday - "Si aan ugu sheego dhammaan asxaabtaada wax ku saabsan ChaCha."
Hadda taasi way fiicantahay!